एपीएफ टोलीद्वारा अवैध औषधीसहित पक्राउसिरहा, सिरहा जिल्लाको सिरहा नगरपालिका १७ स्थित भन्सार गेटबाट फागुन १४ गते एपीएफ टोलीले करीब ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध औषधीसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनुषा जिल्लाको धनुषाधाम नगरपालिका ९ धारापानी बस्ने ४२ बर्षिय अब्जल मनसुर छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट मार्डरबाट खटिएको एपीएफ टोलीले निज मनसुरलाई उल्लेखित औषधीसहित पक्राउ गरेको हो । प्रदेश नं. २–०२२०११ प ४६४९ नम्बरको मोटरसाइकलमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका निज मनसुरलाई एपीएफ टोलीले जाँच गर्दा उनको साथमा उक्त औषधी फेला परेपछि पक्राउ गरिएको हो । एपीएफ टोलीले त्यसवेला उल्लेखित मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका मनसुरलाई बरामद औषधी र मोटरसाइकलसहित आवश्यक कारवाहीको लागि भन्सार कार्यालय मार्डरमा बुझाइएको छ । बरामद मोटरसाइकलको भन्सार दाखिला मूल्य २ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
सिरहा, सिरहा जिल्लाको सिरहा नगरपालिका १७ स्थित भन्सार गेटबाट फागुन १४ गते एपीएफ टोलीले करीब ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध औषधीसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनुषा जिल्लाको धनुषाधाम नगरपालिका ९ धारापानी बस्ने ४२ बर्षिय अब्जल मनसुर छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट मार्डरबाट खटिएको एपीएफ टोलीले निज मनसुरलाई उल्लेखित औषधीसहित पक्राउ गरेको हो । प्रदेश नं. २–०२२०११ प ४६४९ नम्बरको मोटरसाइकलमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका निज मनसुरलाई एपीएफ टोलीले जाँच गर्दा उनको साथमा उक्त औषधी फेला परेपछि पक्राउ गरिएको हो । एपीएफ टोलीले त्यसवेला उल्लेखित मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका मनसुरलाई बरामद औषधी र मोटरसाइकलसहित आवश्यक कारवाहीको लागि भन्सार कार्यालय मार्डरमा बुझाइएको छ । बरामद मोटरसाइकलको भन्सार दाखिला मूल्य २ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।